सलमान खानको परिवारमा दोस्रो डिभोर्स ! « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
सलमान खानको परिवारमा दोस्रो डिभोर्स !
मुम्बई । बलिउड अभिनेता सलमान खानको परिवारबाट एउटा नरमाइलो खबर सार्वजनिक भएको छ । मलाईका अरोडा तथा अरबाज खानपछि अब खान परिवारमा दोस्रो डिभोर्स हुने भएको छ ।
एउटा समाचारमा जनाइए अनुसार सोहल खान तथा सीमा सचदेव खानले आफ्नो २४ वर्ष लामो वैवाहिक जीवन टुंग्याउने निर्णय गरेका छन् । लामो समयदेखि उनीहरुबीच डिभोर्सको चर्चा चलिरहेको थियो । अन्ततः वर्षौंपछि उनीहरुले डिभोर्सका लागि अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका छन् ।
सीमा सचदेव खान स्थापित फेसन डिजाइनर हुन् । सोहेल तथा सीमाको विवाह सन् १९९८ मा भएको थियो । सीमा तथा सोहेलका दुई छोराहरु छन्, जो प्रायः सलमान खानसंग देखिने गर्छन् ।
मलाईका तथा अरबाज सन् १९९८ मा विवाह वन्धनमा बाँधिएका थिए । दुबैको जीवन निकै सुन्दर तरिकाले बितिरहेको थियो, दुबैका एक छोरा पनि छन्, जसको नाम उनीहरुले अरहान खान राखे, जो अहिले अध्ययनका लागि पश्चिमा मुलुकमा छन् । विवाह गरेको १९ वर्षपछि उनीहरुले सन् २०१७ मा छुट्टिने घोषणा गर्दा अधिकांशले यो खबर पत्याउनै सकेका थिएनन् ।
मलाइका–अरबाजको डिभोर्स किन भयो भन्ने कुराको कारण प्रायः सबैलाई थाहा थियो । तर, सोहल र सीमा किन अलग हुन लागेका हुन् भन्ने कुराको जानकारी भने कसैलाई पनि छैन ।
खान परिवारका निकटका एक व्यक्तिका अनुसार सीमा र सोहेल लामो समयदेखि अलग–अलग बसिरहेका थिए । त्यसैले उनीहरुले अहिले आएर औपचारिक रुपमै छुट्टिने निर्णय गरेका हुन् । उनीहरुले आपसी सहमतिमै डिभोर्स गर्न लागेको बताइन्छ । उनीहरुबीच कुनै प्रकारको मनमुटाव समेत नरहेको बताइन्छ ।
सोहेल र सीमाको डिभोर्सको खबरप्रति सलमान खानको परिवारले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । यद्यपि, एउटै परिवारका दुई सदस्यको डिभोर्स हुनुले विभिन्न प्रश्नहरु जन्माएको छ ।
प्रकाशित मिति : बैशाख ३१, २०७९ शनिबार ८ : २५ बजे